कसरी तपाइँको साइट मा एसईओ अवसरहरू पहिचान गर्न Semrush प्रयोग गरी खोज परिणाममा श्रेणीकरण सुधार गर्न Martech Zone
कसरी तपाइँको साइट मा एसईओ अवसरहरू पहिचान गर्न Semrush प्रयोग गरी खोज परिणाममा श्रेणीकरण सुधार गर्न
शुक्रबार, फेब्रुअरी 19, 2021 शुक्रबार, मार्च 5, 2021 Douglas Karr
धेरै वर्षहरूमा मैले सयौं संगठनहरूलाई उनीहरूको सामग्री रणनीतिहरू निर्माण गर्ने र उनीहरूको समग्र खोज इञ्जिन दृश्यता सुधार गर्न मद्दत गरेको छु। प्रक्रिया एकदम सीधा अगाडि छ:
प्रदर्शन - सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूको साइट गति को सम्बन्ध मा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ।
उपकरण - निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूको साइटको अनुभव डेस्कटप र विशेष गरी मोबाइलमा उत्कृष्ट छ।
ब्रान्डिङ - निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूको साइट आकर्षक, प्रयोग-गर्न-सजिलो छ, र तिनीहरूको फाइदा र भिन्नताका साथ लगातार ब्रान्ड गरिएको छ।
सामग्री - निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूसँग सामग्री लाइब्रेरी छ जसले उनीहरूका खरीददारहरूको यात्राको प्रत्येक चरण समावेश गर्दछ, र प्रत्येक माध्यमको राम्रो संरचनायुक्त पृष्ठमा उपयोग गर्दछ।
कल-टु-एक्शन - निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले आगन्तुकहरूलाई प्रत्येक पृष्ठमा के गर्ने र सामग्रीको प्रत्येक टुक्राको साथ प्रदान गर्ने सुविधा प्रदान गर्नुहोस्।
पदोन्नति - निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरूसँग एक सक्रिय रणनीति छ कि यो निश्चित गर्न को लागी उनीहरूको सामग्री अनलाइन साझा गरीएको छ सामाजिक मिडिया, उच्च-गुणवत्ता निर्देशिका, उद्योग, र प्रभाव साइटहरु।
खोजी सामग्री निर्माण गर्न मात्र होईन, यो तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा उच्च-गुणवत्ता सामग्री उत्पादनको बारेमा हो।
तपाईका खोज प्रतिस्पर्धी को हुन्?
त्यो एक अनौंठो प्रश्न जस्तो देखिन सक्छ, तर तपाइँको खोज इञ्जिनहरूमा प्रतिस्पर्धीहरू केवल कम्पनीहरू होइनन् कि प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरू र सेवाहरू छन्। खोज ईन्जिनमा तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू हुन्:
उद्योग वेबसाइटहरू त्यो समान कुञ्जी शब्दहरूको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दछ र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूलाई ट्राफिक धक्का दिन सक्छ।
अनलाइन निर्देशिकाहरू जसको एकमात्र उद्देश्य तपाईको भन्दा राम्रो श्रेणीकरण गर्नु हो ताकि तपाइँ उनीहरूसँग विज्ञापन गर्न बाध्य हुन सक्नुहुन्छ।
सन्दर्भ वेबसाइटहरू विकिपेडिया जस्तै जोसँग असाधारण खोज रैंकिंग अधिकार छ।
समाचार वेबसाइटहरू त्यो तपाइँको ब्रान्ड सर्तमा तपाइँसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ किनभने उनीहरूको खोज इञ्जिन अधिकारका कारण।
शिक्षा वेबसाइटहरू कि उही विषयहरूमा क्लास वा कोर्स हुन सक्छ। शिक्षा साइटहरूको अक्सर उत्कृष्ट अधिकार पनि हुन्छ।
सामाजिक मिडिया साईटहरू जुन तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुन कोशिस गर्दै छन् ताकि तपाईं उनीहरूसँग विज्ञापन गर्न बाध्य हुन सक्नुहुन्छ।
प्रभावकारी वेबसाइटहरू जुन तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न छन् ताकि तिनीहरूले विज्ञापन बेच्न सक्दछन् वा सम्बद्ध कम्पनीहरूसँग संलग्न हुन सक्छन्।
विन्दु मा मामला, Martech Zone धेरै मार्टेक प्रदायकहरूसँग बिल्कुलै प्रतिस्पर्धी हो जब यो श्रेणीकरण र ट्राफिकको कुरा आउँछ। मेरो साइट मोनेटाइज गर्न, म प्रतिस्पर्धा गर्न र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी र उच्च यातायात कुञ्जीशब्दहरूमा जीत आवश्यक छ। जब म त्यसो गर्छु, बढि व्यक्तिले मेरो साइटमा विज्ञापनहरू वा सम्बद्ध लिंकहरूमा क्लिक गर्नेछ - ड्राइभि revenue राजस्व। र प्रायः, मेरो रैंकिंगले कम्पनीहरूलाई प्रायोजन गर्ने पोष्टहरू र कोटिहरू कोशिस गर्दछ र अधिक दिशामा ड्राइव गर्न को लागी।
तपाइँ तपाइँको खोजी प्रतिस्पर्धीहरू कसरी भेट्टाउनुहुन्छ?
जबकि तपाई सोच्नुहुन्छ कि तपाई केवल खोज गर्न सक्नुहुन्छ र कसले परिणाममा कसले देखाउँछन् भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू को हुन् भनेर पहिचान गर्ने उत्तम माध्यम होइन। कारण यो हो कि खोज ईन्जिनहरूले खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरू निजीकृत गर्छन् (SERPs) खोजी ईन्जिन प्रयोगकर्तालाई - दुबै स्थानीय र भौगोलिक रूपमा।
त्यसो भए, यदि तपाईं साँच्चिकै आफ्नो प्रतिस्पर्धा पहिचान गर्न चाहानुहुन्छ भने - तपाईंले एक उपकरण जस्ता प्रयोग गर्नु पर्छ Semrush जसले खोज ईन्जिन परिणामहरूको वरिपरि बुद्धि र रिपोर्टि col संकलन गर्दछ र प्रदान गर्दछ।
Semrush तपाइँको डोमेनले कसरी कुञ्जी शब्दहरूमा प्रदर्शन गरिरहेको छ भनेर पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ र कसरी तपाइँ आफ्नो प्रतिस्पर्धाको बिरूद्ध तपाइँको समग्र मूल्या ranking्कन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ मा खाली र अवसरहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
चरण १: कुञ्जी शब्दबाट तपाईंको डोमेनको स्तर निर्धारण गर्नुहोस्
प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान गर्दा मैले लिने पहिलो चरणमा म पहिल्यै रँकिरहेको छु भनेर पहिचान हुन्छ। यसको कारण एकदम सरल छ ... मेरो लागि अनुकूलित गर्न को लागी सजिलो छ र किवर्ड्समा अगाडि बढ्न जुन मँ पहिले नै श्रेणीकृत गर्छु जुन कि मेरो साइटले फेला पारेको छैन।
मैले प्रयोग गर्ने फिल्टरहरू भिन्न हुन्छन्:
स्थिति - मँ पृष्ठ -4-१० बाट सुरू गर्दछु किनकि म पहिले नै पृष्ठ १ मा छु र यदि म स्थिति 10 सम्म पुग्न सक्दछु, मलाई थाहा छ म मेरो ट्राफिकमा उल्लेखनीय बृद्धि गर्नेछु।
स्थितिमा भिन्नता - म स्थानहरू हेर्न चाहन्छु जहाँ म पहिलेदेखि नै मेरो श्रेणी rank महिना-महिना बढाउँदै छु किनकि यसको मतलब सामग्री सामग्री अधिकार पाइरहेको छ र म यसलाई अनुकूलन गर्न र यसलाई पुन: बढावा दिन सक्षम हुन सक्छु।
खण्ड - खण्डहरु दसौं वा सयौं हजार मा छन् भने, म ती पृष्ठहरु अनुकूलित गर्न सक्छ तर म तुरून्त परिणाम अपेक्षा छैन। नतिजाको रूपमा, म प्रति महिना १००० र १,००० खोजीहरू बीच खोजी भोल्यूमहरू खोज्छु।
श्रेणीकरण पृष्ठ अनुकूलन गर्नेमा केस स्टडी
तपाईं याद गर्नुहुनेछ कि म माथि बढेको छु भ्यालेन्टाइन डे प्रतियोगिता। त्यो किवर्ड हो जुन मैले बजारमा सामाजिक मिडिया प्रतिस्पर्धामा अनुसन्धान गरिरहेका मार्केटर्सको तयारीको लागि काम गरें ... र यसले काम गर्यो! मैले पुरानो लेखलाई अनुकूलन गरेर र त्यसमा डाटा र छविहरू ताजा गरेर हजारौं भ्रमणहरू प्राप्त गरें। मैले कुञ्जी शब्दहरूलाई लक्षित गर्नको लागि पोष्ट स्लगलाई पनि अनुकूलित गरेको थिएँ, "भ्यालेन्टाइन-डे-अभियान" लाई "भ्यालेन्टाइन-डे-सोशल-मिडिया-प्रतियोगिता" मा परिवर्तन गर्ने।
गत वर्ष, मैले फेब्रुअरी १ ​​र १th बिचको बीचमा खोज ईन्जिनहरूबाट २ 27 पटक भेटें। यस बर्ष, मैले खोज इञ्जिनहरूबाट 1 ०15 भ्रमणहरू प्राप्त गरें। त्यो पृष्ठको सामग्रीमा सानो समायोजनको लागि जैविक ट्राफिकमा यो राम्रो वृद्धि हो।
चरण २: कुञ्जी शब्द अवसर पहिचान गर्नुहोस्
त्यो सूचीमा पहिलो किवर्ड वास्तवमा एक ब्रान्ड हो, त्यसैले म विश्वस्त छैन कि म राम्रो क्रममा जान्छु वा त्यो ट्राफिकलाई जित्न चाहन्छु। यदि कसैले Acquire.io खोज्दै छ भने ... तिनीहरू सायद वास्तविक वेबसाइट चाहान्छन्।
जे होस्, दोस्रो कीवर्ड - सामग्री पुस्तकालय - त्यो एक हो जुन म उत्तम र्याँकिंगमा एकदम रुचि राख्छु। यो मेरो व्यापार सेवाहरूको एक कोर हो र म मार्केटर्सलाई उनीहरूको सामग्री उत्पादकत्वको साथ मार्केटिंग परिणामहरू ड्राइभ गर्न मद्दतको लागि उत्साहित छु।
TIP: के त्यो पृष्ठ सम्बन्धित कुञ्जी शव्दहरूमा पहिले नै क्रमबद्ध छ?
यो नबिर्सनुहोस् कि यदि तपाइँ उच्च-स्तरको पृष्ठ लिनुहुन्छ र विशेष खोजशब्दको लागि यसको अप्टिमाइजेसन बर्बाद गर्नुहुन्छ भने तपाइँ वास्तवमा तपाइँको समग्र खोज ट्राफिकमा चोट पुर्‍याउन सक्नुहुनेछ। त्यसोभए, दोस्रो कुरा जुन म गर्छु त्यो यो हो कि URL मा क्लिक गरेर त्यस विशिष्ट पृष्ठले केको लागि दर्जा दिन्छ Semrush रिपोर्ट म मेरा सबै फिल्टरहरू हटाउँछु र सूची मार्फत स्थानमा क्रमबद्ध गर्छु।
त्यसोभए ... यो राम्रो देखिन्छ। जबकि म लागि स्तर भवन र सिर्जना गर्दै एक सामग्री लाइब्रेरी, स्पष्ट रूपमा मेरो श्रेणी माथि हुँदै सामग्री पुस्तकालय मेरो साइट को लागी धेरै अधिक यातायात ड्राइव।
मा पनि ध्यान दिनुहोस् SERP सुविधाहरू कि त्यहाँ चित्रित स्निपेट्स, भिडियो, र समीक्षा छन्। म हेर्न चाहन्छु कि मैले केहि पनि समावेश गरेको छु जुन मेरो लेखमा मद्दत गर्न सक्दछ जुन पहिले नै दर्ता छ।
चरण:: मेरो SEO प्रतिस्पर्धीहरू पहिचान गर्नुहोस्
यदि म क्लिक गर्छु सामग्री पुस्तकालय पहिलो स्तम्भमा, मँ अब देख्न सक्छु कि मेरो प्रतिस्पर्धी को हो खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठहरूमा:
चरण:: तपाईंको सामग्री उनीहरूको सामग्रीसँग तुलना गर्नुहोस्
SERP सुविधाहरू प्रयोग गरेर पहिले र यी प्रत्येक पृष्ठहरूको विश्लेषण गरेर, म अब सिफारिशहरूको साथ आउन सक्छु कसरी मेरो समग्र सामग्रीलाई अझ राम्रो बनाउन को लागी अनुक्रमणिकामा राम्रो बनाउन। सामग्री पुस्तकालय, साथै केही ब्याकलिंक्स ड्राइभ गर्न यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने केही अवसरहरू पहिचान गर्नुहोस् ... जसले अन्ततः मलाई राम्रो स्थान दिनेछ।
मसँग वास्तवमै मेरो पृष्ठमा म भन्दा बढि पृष्ठहरूको पृष्ठ भन्दा धेरै ब्याकलिks्कहरू छन्। अवश्य पनि, ती मध्ये केही डोमेनको अधिक अधिकार छ त्यसैले मैले मेरो लागि कार्य समाप्त गरें। त्यो पृष्ठमा शीर्ष-र ranking्कि 2013 लेख २०१ XNUMX मा लेखिएको देखिन्छ, त्यसैले म अझ बढी विश्वस्त छु कि म केहि राम्रो नतीजाहरू पनि चलाउन सक्छु। र, लेखहरूको सूचीको विश्लेषणमा ... तिनीहरू मध्ये केहि पनि कुञ्जी शब्दमा प्रासंगिक हुँदैन।
चरण:: तपाईंको सामग्री सुधार गर्नुहोस्
यसको सामना गरौं ... मेरो लेख सब भन्दा राम्रो होइन ... त्यसैले यो समय यसलाई वास्तवमा बढाउने समय हो। यस अवस्थामा म विश्वास गर्छु कि म गर्न सक्छु:
अनुकूलन गर्नुहोस् शीर्षक लेख को।
अधिक सम्मोहक घुसाउनुहोस् चित्रित छवि त्यो सामाजिक मिडिया प्रचार बाट अधिक यातायात ड्राइव।
थप एक भिडियो जहाँ म समग्र रणनीति व्याख्या गर्छु।
थप जोड्नुहोस् रेखाचित्र लेख भित्र।
थप घुसाउनुहोस् विस्तार खरिददारहरूको यात्रा वरिपरि र कसरी सामग्री अधिक सment्लग्नता र रूपान्तरण।
यस अवस्थामा, म विश्वास गर्दछु कि सामग्री अपडेट गर्नु र यसलाई सोशल मिडियामा पुनः आकार दिन वास्तवमै राम्रो खोजी परिणामहरू ड्राइभ गर्न पर्याप्त छ। व्यक्तिहरूको नयाँ तरंग सामग्री पढ्ने र यसलाई अनलाइन साझेदारी गर्ने Google लाई आवश्यक संकेतकहरू प्रदान गर्दछ कि सामग्री उच्च छ, ताजा छ, र राम्रो क्रमबद्ध हुनुपर्दछ।
चरण:: तपाइँको सामग्री पुन: प्रकाशित गर्नुहोस् र प्रचार गर्नुहोस्
यदि तपाइँको लेख तपाइँको ब्लग मा छ, एक नयाँ यूआरएल र स्लग राखेर, नयाँ को रूप मा पुन: प्रकाशित गर्न नडराउनुहोस्। किनकि तपाईं पहिले नै क्रमबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो पृष्ठको URL परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न!
र, यो प्रकाशित हुने बित्तिकै, तपाईं तपाईंको ईमेल न्यूजलेटर, ईमेल हस्ताक्षर, र तपाईंको सामाजिक मिडिया प्रोफाइल मार्फत सामग्री वितरण र प्रचार गर्न चाहानुहुन्छ।
चरण:: तपाईको एनालिटिक्स र सेमर्रश हेर्नुहोस्!
म सामान्य रूपमा सामग्री पुन: प्रकाशन र प्रबर्धन गर्दा भ्रमणहरूमा तत्काल बढेको देख्छु तर समग्र श्रेणीकरणमा तत्काल परिवर्तन हुँदैन। म सामान्यतया पुन: भ्रमण गर्दछु Semrush in23 सप्ताह गर्न हेर्नको लागि कि कसरी मेरो परिवर्तनहरूले त्यो विशिष्ट यूआरएलको लागि समग्र स्तरलाई प्रभाव पार्‍यो।
यो एक विजयी रणनीति हो जुन म हप्ताको आधारमा मेरा ग्राहकहरूको लागि तैनाती गर्छु ... र यो आश्चर्यजनक छ कि यसले कसरी राम्रो काम गर्दछ।
Semrush को साथ शुरू गर्नुहोस्!
यदि तपाईं कार्बनिक वृद्धि चलाउन सामग्रीको उपयोगको बारेमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने जाँच गर्नुहोस् Semrushs सामग्री मार्केटिंग टूलकिट जहाँ तपाईं योजना, लेख्न, र तपाईंको सामग्री सबै एकै ठाउँमा विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ।
यो Semrush सामग्री मार्केटिंग प्लेटफर्मले सफल सामग्री रणनीति विकास गर्न र तपाईंको दर्शकलाई संलग्न गराउने सामग्री सिर्जना गर्न विस्तृत समाधान प्रदान गर्दछ। तपाईंको कार्यप्रवाहको प्रत्येक चरणमा रचनात्मकता र एनालिटिक्स जोड्नुहोस्।
के मेरो अनुकूलित पृष्ठ रैंक राम्रो भयो? मेरो अनुवर्ती लेखमा खोज्नुहोस्!
Semrush को बारेमा
सेम्रश रिब्रेन्ड गरिएको छ र उनीहरूको कीवर्ड डाटाबेस 17.6B बाट 20B मा बढ्यो। दुई वर्ष अघि यसले केवल 2B किवर्डहरू समावेश गर्‍यो - त्यो हो १०x वृद्धि! तिनीहरूले आफ्ना योजनाहरू समायोजित पनि गरे:
प्रति - फ्रीलांसरहरू, स्टार्टअपहरू, र इन-हाउस मार्केटरहरूले उनीहरूको एसईओ, पीपीसी, र एसएमएम प्रोजेक्टहरू बढाउन यो प्याकेजको उपयोग गर्छन्।
Semrush Pro नि: शुल्क प्रयास गर्नुहोस्!
गुरु - साना व्यवसाय र मार्केटिंग एजेन्सीहरूले यो प्याकेजको उपयोग गर्छन्। योसँग सामग्री मार्केटिंग प्लेटफर्म, ऐतिहासिक डाटा र गुगल डाटा स्टुडियो एकीकरणको अतिरिक्त प्रो सुविधाहरू छन्।
Semrush Guru नि: शुल्क प्रयास गर्नुहोस्!
व्यापार - एजेन्सीहरू, ई-वाणिज्य परियोजनाहरू, र ठूला साइटहरूले यो प्याकेज प्रयोग गर्दछ। यसमा एपीआई पहुँच, विस्तारित सीमा र साझेदारी विकल्पहरू, र भ्वाइस रिपोर्टि ofको साझेदारी समावेश छ।
Semrush व्यवसाय को सदस्यता लिनुहोस्
खुलासा: म सम्बद्ध छु Semrush र म उनीहरूको सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु।
टैग: सामग्री रैंकिंग विश्लेषणकसरी र्याकिंग सुधार गर्नेकसरी प्रतिस्पर्धीहरु अनलाइन अनुसन्धान गर्नजैविक खोजी अवसरहरूखोज इञ्जिन विश्लेषणखोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठखोज परिणामsemrushएसईओ विश्लेषणएसईओ प्रतिस्पर्धी विश्लेषणएसईओ अवसरहरूएसईओ रैंकिंग